प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस एक्लैले संघर्ष गर्ने देउवाको उद्घोष – indepth.com.np
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस एक्लैले संघर्ष गर्ने देउवाको उद्घोष
१३ पुष २०७७, सोमबार १९:३४
भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत मध्यपुर थिमिमा भएको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । तस्बिर : ईश्वरकाजी खाइजू
भक्तपुर । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस एक्लैले संघर्ष गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
संसद विघटनविरुद्ध सोमबार भक्तपुरको मध्यपुर थिमिमा आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले पार्टीले एक्लै संघर्ष गर्दा आफ्नो शक्ति र संख्याको आँकलन हुने स्पष्ट पारे ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदम भएको स्पष्ट पारे ।
त्यसैले उक्त असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदमविरुद्ध कांग्रेस एक्लैले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने पार्टीले निर्णय गरेको उनको स्पष्टोक्ति थियो ।
पहिले संयुक्त आन्दोलन गरिँदा धोका पाएको स्मरण गर्दै उनले सभापति देउवाले भने, ‘हामी कसैसँग मिलेर संसद विघटनविरुद्ध जान्नौं । हामी एक्लै आन्दोलनमा जान्छौं । एक्लै संघर्षमा जाँदा कांग्रेसका शक्ति र संख्याको पनि आँकलन हुन्छ । र, जनतालाई पनि हाम्रो स्पष्ट अडान र धारणा बताउन सकिनेछ ।’
भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र २ अन्तर्गत भएको उक्त विरोधसभा उनले संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
कांग्रेसले यहीं निर्णय गर भनेर अदालतलाई नधम्क्याउने र नतर्साउने उनले स्पष्ट पारे ।
राजाको प्रत्यक्ष शासन रहेको पञ्चायती व्यवस्थामा समेत अदालतले स्वतन्त्र निर्णय दिएको स्मरण गर्दै सभापति देउवाले भने, ‘पञ्चायतमा पनि हामीले न्याय पाएका थियौं । अदालतले हिम्मत गथ्र्यो ।’
उनले कांग्रेसले अदालतको निर्णय मान्ने र अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै आएको बताए । उनले स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई कसैले पनि हस्तक्षेप गर्ने, धम्क्याउने र तर्साउने कार्य गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
कम्युनिष्टहरु सरकारमा आएपछि न्यायालयमा हस्तक्षेप हुन थालेको भन्दै सभापति देउवाले थपे, ‘तैपनि कतिपय अवस्थमा अदालतले स्वविवेकीय निर्णय गरेको छ । अहिले पनि त्यहीं निर्णय आउने विश्वासमा छौं ।’
सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गर्ने वा प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम सदर गर्ने जुन निर्णय दिए पनि कांग्रेसले मान्ने उनको भनाइ थियो ।
‘त्यसैले अदालतको निर्णयसम्म कांग्रेसले पर्खन्छ’, उनले थपे, ‘अदालतको निर्णय आफ्नो ठाउँमा होला । तैपनि कांग्रेस जनताबीच जान तयार भएर बस्नुपर्छ ।’
संसद विघटनविरुद्ध अरु पार्टीहरुले पनि सँगै आन्दोलनमा जान आग्रह गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
सभापति देउवाले कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था हेरेर पार्टीले निरन्तर संघर्षका कार्यक्रम जारी राख्ने जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा कांग्रेस आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य रमा पौडेल, भक्तपुर जिल्ला सभापति दुर्लभ थापा, पूर्वजिल्ला सभापति गणेशमान चक्रधर, क्षेत्र नं. १ का सभापति जीवन खत्री, क्षेत्र नं. २ का सभापति नारायणभक्त खायमलीलगायतले केपी ओली प्रतिगमनतर्फ अघि बढेको भन्दै संविधानविरोधी कदमविरुद्ध सबै आन्दोलित हुनुपर्ने धारणा राखे ।
सोमबार नै भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा पनि कांग्रेसको विरोधभसभा भयो । भक्तपुर कमलविनायकबाट जुलुस प्रदर्शनपछि भक्तपुर नगरपालिका कार्यालय परिसरमा भएको विरोधसभामा जिल्ला सभापति दुर्लभ थापा, नेपाल तरुण दलका पूर्वअध्यक्ष विनोदप्रकाश कायस्थ, नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष बाबुराजा जोशीलगायतले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरे ।
Related Topics:FeaturedNepali CongressPolitics
प्रचण्ड-नेपाल समूहतर्फै खुले केन्द्रीय सदस्य मिश्र
भक्तपुरमा दुई राप्रपाले बुझायो ज्ञापनपत्र